CeleHits - Page2of 504 - News and Media
September 15, 2021 by CeleHits
သမီးကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ရခက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအမေတအားမုန်းတယ်လို့ပြောလာတဲ့ချမ်းချမ်း တေးသံရှင်ချမ်းချမ်းဟာဆိုရင် Melody world သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေပြီး ပရိတ်သတ်အများကြီးလက်ခံခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းချမ်းဟာ ပထမအိမ်ထောင်နဲ့ သမီးလေးတစ်ဦးရခဲ့ပြီး ယခုအခါဒုတိယအိမ်ထောင်နဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ဦး ထပ်မံရရှိပြီးနိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေထိုင်နေပါတယ်။ မနေ့က စက်တင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့ဟာချမ်းချမ်းရဲ့မွေးနေ့ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့မွေးနေ့မှာ သမီးကြီးကိုအရမ်းသတိရနေကြောင်း နှင့်သမီးကြီးနဲ့အဆက်သွယ်ခက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအရမ်းမုန်းကြောင်းသူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ “အမေ့ မွေးနေ့မှာ အမေချစ်ရတဲ့ သမီးကြီးအမေနဲ့ အတူမရှိနိုင်သေးပေမဲ့ အမေလက်မလျော့ဘူး ကြိုးစားနေတယ် အမေ့သမီးလေးနဲ့ အတူ မွေးနေ့တွေဖြတ်သန်းခဲ့ပေမဲ့ ဒီနှစ် အမေမပျော်လှပါဘူးသမီးရေ သမီးညမလေးနဲ့ အမေ သမီးကို သတိရနေတယ် မနက်က သမီးနဲ့ ဖုန်းပြောလိုက်ရလို့အမေ အရမ်းဝမ်းသာတယ် အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး သမီးလေးလှပီးနေကောင်းနေလို့ ဘုရားကို ကျေးဇူးတင်မိတယ် ကျန်ခဲ့တဲ့ မွေးအဖေမွေးအမေကိုလဲ အဝေးကနေ ရှိခိုးကန်တော့ပါတယ်🙏🙏🙏🙏 အခုဒီမှာလဲ အားလုံးက လိုလေသေးမရှိ လက်ဆောင်တေပေးပီးနှစ်သိမ့်ကြပေမဲ့ အမေ မပျော်နိုင်ဘူးသမီးရေ မပြည့်စုံဘူး … Read more
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာတွင် ထပ်မံသရုပ်ဆောင်လိုကြောင်းမင်းသမီးမီရှဲလ်ယိုပြော မလေးရှားနိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့ယိုဟာ အသက် ၂၀ အရွယ် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ Miss Malaysia ဘွဲ့ ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လောကကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဟောလီးဝုဒ်မှာပါ အောင်မြင်လာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအရင်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း ရိုက်ရတာမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့လည်း ယိုက The Guardian သတင်းစာကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှာ ထပ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ချင်သေးတယ်လို့ ဟောလီးဝုဒ် နာမည်ကျော်မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဘဝကို အခြေခံရိုက်ကူးထားပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Lady မှာ မီရှဲလ်ယိုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ The Guardian သတင်းစာနဲ့ မနေ့ကအင်တာဗျူးမှာ လက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ … Read more
အူဝဲ နှင့် သုသု တို့ အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့“what happened to the wolf?”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ပြသမည်။
September 14, 2021 by CeleHits
အူဝဲ နှင့် သုသု တို့ အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့“what happened to the wolf?”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ပြသမည်။ အားလုံးကချစ်စနိုးနဲ့ အူဝဲလို့ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ သုသုလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ what happened to the wolf? ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်ပြသတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရွှေမင်းသမီးလေး ၂လတ်ဟာဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားထဲ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မ​ကောင်းစရာကောင်းတာက အူဝဲက ခုဆိုရင်ခင်ပွန်းသည် ပြေတီဦးနဲ့အတူထောင်ကျ​နေပြီး သုသုကတော့၅၀၅(က)နဲ့ တရားဆွဲခံထားရပြီးထွက်ပြေးတိန်းရှောင် နေရပါတယ်။ သူမတို့ရဲ့ဇာတ်ကားလေးပြသတော့မယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့သူမတို့ကိုလွမ်းမိပါတယ်။ “what happened to the wolf? ဇာတ်ကားလေး အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပြီး ဆူတွေလည်း အများကြီးရပါစေလို့ဆု​တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်အောင်ရင်
အမေစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်အောင်ရင် တစ်ချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဝါရင့်အဆိုတော်ကြီးအောင်ရင်ကတော့သီချင်းတွေကိုပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်အောင်သီဆိုနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ဒီနေ့မှာတော့အဆိုတော်အောင်ရင်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့လူမူကွန်ယက် မှာရေးသားထားပါတယ်။ ညကအမေစုကိုအိပ်မက်မက်တယ်၊အမေစုရယ်ကော်နီရယ် ကျနော်ကအိမ်ကိုထမင်းစားဖို့ခေါ်လာတာတဲ့ အိမ်ရောက်တော့ဟင်းကတမျိုးထဲဖြစ်နေလို့ညီထွေးကိုသွားဝယ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးမက်တယ်ခုဏကပဲဒေါ်မိုးကိုပြောပြတော့အမေစုနေသိပ်မကောင်းဘူးလို့သိရတယ်။ တရားရုံးသွားတာကားကိုဘယ်လိုများမောင်းလည်းမသိဘူးခေါင်းမူးလို့သေချာမထိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ဒီနေ့တရားရုံးကပြန်သွားရတဲ့သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်ပြောတယ်၊အမေစီးလာရတဲ့ကားမောင်းတာကြမ်းလို့ခေါင်းမူးတယ်ဆိုတော့အတော်များဖြစ်နေသလားအမေရယ်စိတ်ပူလိုက်တာဗျာ၊အမေစုကျန်းမာပါစေခင်ဗျာလို့အဆိုတော်အောင်ရင်ကလူမူကွန်ယက် မှာရေးသားထားပါတယ်။
ချစ်သူလေးထွက်သွားတာ၂လရှိပေမယ့်မေ့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ညီထွဋ်ခေါင် ညီထွဋ်ခေါင်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့၂လက covid 19ရောဂါဖြင့် ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့သူ့ချစ်သူက ၁၄နှစ်ကြာအောင်လက်တွဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တွေအကြာကြီးတွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူလေးကိုမမေ့နိုင်ပဲ သူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းအဆက်မပြတ်လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ​တော့သူ့ရဲ့facebook story မှာ (၂) လပြည့်တာတောင် မေ့မရနိုင်သေးဘဲ သတိရစိတ်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်နေရကြောင်း ရင်ဖွင့်ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်နော်။မေ​ရေထွက်သွားလိုက်တာ (၂) လတောင် ပြည့်သွားပြီ။ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာ သိနေပေမယ့် ဘယ်ဆီကိုများ ရောက်နေ မလဲလို့ တွေးရင်း တမ်းတမိနေတာတော့ နေ့တိုင်းပါပဲ။ မေမရှိတဲ့ဘဝမှာ တစ်ယောက်တည်း နေသားကျဖို့ တော်တော် ကြိုးစားရဦးမယ်။ သတိရတယ် လွမ်းတယ် ဆိုတာထက် ပိုပါတယ်မေရေ” လို့ ခံစားချက်တွေကို ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်နော်။ ညီထွဋ်ခေါင်ဟာ သူ့ကောင်မလေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန် အနားမှာနေပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့သူတွေကိုချစ်သူလေးနဲ့ တိုင်လိုက်တဲ့ယဉ်လတ် သရုပ်ဆောင်ယဉ်လတ်ကတော့ ဖိုက်တင်ခန်း အချစ် အလွမ်း ရဲမေ စစ်သမီးစတဲ့ ကျရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်တက်တဲ့ပြည်သူချစ်မင်းသမီးချောလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တပ်ထောက်ခံသူ တစ်ဦးဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့social punishment လုပ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်လတ်ကတော့ သူမကိုမည်သူပဲဝေ ဖန်နေနေ အေးဆေးစွာနဲ့ သူမနေမြဲအတိုင်း လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်နေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တစ်ခါတစ်ရံ MWDရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်း သူမပုံရိပ်လေးတွေ တစ်ခါတစ်ရံပါလာတက်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့သူမကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ကြောင်း ဝေဖန်သူတွေကိုသူမရဲ့ချစ်သူလေးကို ရင်ဖွင့်တိုင်ကြားနေပါပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ သူမချစ်သူနဲ့ပြောထားတဲ့စကားလေးတွေကိုသူမရဲ့ storyမှာတင်ထားပါတယ်။
မွေးနေ့မှာချစ်သူဆီကဆုတောင်းစကားနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေရလို့ပျော်နေတဲ့ ခိုင်သဇင်ငုဝါ
မွေးနေ့မှာချစ်သူဆီကဆုတောင်းစကားနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေရလို့ပျော်နေတဲ့ ခိုင်သဇင်ငုဝါ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သဇင်ငုဝါဟာဆိုရင် ကြော်ငြာသရုပ်ဆောင် modelမင်းသမီးလေးတစ်ဦးလည်း​ဖြစ်ပါတယ်။ သူမမှာ ခိုင်သဇင်ယုဝါဆိုတဲ့အမွှာအမတစ်ဦးလည်းရှိပါတယ်။ မနေ့က စက်တင်ဘာလ၁၃ရက်နေ့ဟာဆိုရင် ခိုင်သဇင်ငုဝါ နဲ့ခိုင်သဇင်ယုဝါတို့ရဲ့ ၂၇နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်သဇင်ငုဝါရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူက အနားမှာအတူမရှိနိုင်လို့ မွေးနေ့အတွက်ဆု​တောင်းစကားvedioလေးနဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကိုပို့လာပေးကြောင်းသူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။ အလိုက်သိတက်လွန်းတဲ့ချစ်သူလေးက သူမအရမ်းကြိုက်တဲ့ ပီဇာရယ် အိတ်လေးရယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမအကြိုက်ဆုံးအနီရောင်suprise boxလေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပို့လာခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်သဇင်ငုဝါတစ်ယောက် မွေးနေ့မှစလို့ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိပါစေ။ လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်ပါစေ။ ချစ်သူလေးနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Vaseline လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အဖုံးအပြာလေးနဲ့ ဗူးလေးကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်မိကြမှာပါ။ Vasline မှာ အလှအပအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့အပြင် တော်တော်လေးလည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ပျိုပျိုမေလေးတို့ Skin care တွေ အများကြီး ဆောင်စရာမလိုဘဲ Vaseline လေး ရှိနေရင်ကို အဆင်ပြေနေပြီနော်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေအသုံးဝင်သလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်နော်။ Vaseline ဟာ mineral အဆီနဲ့ ဖယောင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းသော petroleum jelly နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အသားအရေအတွက် ကောင်းဖို့အတွက် အဓိက ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ဝက်ခြံ ဝက်ခြံအတွက်လည်း Vaseline ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝက်ခြံပေါ် တိုက်ရိုက်တော့ မလိမ်းပါနဲ့။ တစ်ရှူးစလေး ခံပြီးလမ်းတာမျိုးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ … Read more
“AYA ဘဏ်ငွေသယ်ကား ဓားပြတိုက်ခံရ၊ ကျပ်သိန်းလေးသောင်းကျော်ပါသွား”
September 13, 2021 by CeleHits
“AYA ဘဏ်ငွေသယ်ကား ဓားပြတိုက်ခံရ၊ ကျပ်သိန်းလေးသောင်းကျော်ပါသွား” ယနေ့စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့တွင် AYA Bankမှ ငွေသည်လာသောကားတစ်စီး အင်းတကော်မြို့အနီး တွင်ဓားပြတိုက်ခံရ ကြောင်းသိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဘဏ်မှ ပဲခူးဘဏ်များမှငွေများသယ်လာသည့်ကားကို အင်းတကော်အနီးတွင် ယာဉ်ထိန်းရဲအယောင်ဆောင်ပြီး ဓားပြတိုက်မှုစက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ယနေ့နေ့လည်ကဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အဆိုပါဖြစဉ်အတွင်း ငွေကျပ်သိန်းလေးသောင်းကျော်ပါသွားကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဓားပြအဖွဲ့နောက်သို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံစုံစမ်းနေပြီး ယခုလပိုင်းအတွင်းဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုများဆက်တိုက်ဖြစ်ကာ တစ်မှုမှဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
ပရိတ်သတ်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ မိတ်ဆက်​ပေးလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် dancer လေး Ranz Kyle
ပရိတ်သတ်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ မိတ်ဆက်​ပေးလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် dancer လေး Ranz Kyle Ranz Kyle ကို မြန်မာပရိတ်သတ်တော်တော်များများသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ သူဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးတွေနဲ့ အကvedioလေးတွေတင်ရင်း နာမည်ကြီးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကမောင်နှမ ၂ယောက် vedioလေးတွေပဲတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမအငယ်လေးပါ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၃ယောက်အတူကတဲ့ vedioလေးတွေပါတင်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတဲ့ family ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Ranz Kyle ဟာ ဖိလစ်ပိုင်တွင်မက ထိုင်း မြန်မာ ဗီယက်နမ် စတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသဲစွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Ranz Kyleက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကိုအသဲခွဲတဲ့ vedioလေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက​တေ့ာသူ့ရဲ့ face book စာမျက်နှာမှာ ‘finally I’m introducing her to you’ ဆိုပြီး သူ့ချစ်သူနဲ့ပရိတ်သတ်ကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ … Read more
← Previous Page1 Page2 Page3 … Page504 Next →